トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ umsebenzi oqhelekileyo ngexesha kweqonga lokukhetha elibe pa
Khangela ukuqinisekisa ukushiya iqonga na ibali engenakwenzeka, kodwa, ukuze kuthintelwe utyalo nekukudlala ngemali, iinkcukacha kunye nezikhonkwane na indawo ofuna ukubona. Ngo, kule theyibhile ukukhetha ngexesha ushishino oluqhelekileyo, siza kujonga indlela I ukukhetha ingqalelo iqonga nayiphi na inxalenye. Kuqala kwinto zonke, siya kujonga data.
Oku, Kuxhomekeka ixesha kutyelela, xa ukubona data, kufuneka ucinge kuthathelwa ingqalelo into yokuba ngumhla ushishino oluqhelekileyo. Ngemini ushishino oluqhelekileyo, ngokuba kungekho uza kucinywa icala pa parlour, kuba nje akomelela imini ngaphambili, ngekumlungele kanye ukuba iyakuvingca ukuba nangoko wahlala phantsi.
kule theyibhile eziphezu kusuku olungaphambili, wena unguye ukuba inani amaxesha olunjani kwicala Hit eyoqobo kunye nenani revolutions ye imini kubalulekile. Kwaye iye baphume imini ngaphambili, naye iqela elungileyo yeenguqu kuma imini, kukho kungenzeka ukuba mini phambi kwaye isikhonkwane hayi itshintshe. Ukongeza, nokuba akukho yayiqinisa Inochikugi, yeenzipho edlula ibhola de kokuqalisa lezikhonkwane induction, usenokuba some.
ngoku kwesibane data, kukho kwakhona iqela uhlobo isantya ojikeleza ngaso efikelela ukubetha iyavezwa. Kude omnye big hit, Hlala kwakhona ukuqinisekisa ukuba indlela apho ujikelezo. Kwiintsuku ezimbalwa inombolo enamandla, ofanelekileyo nokujikeleziswa imini, ukuba hit le budget wayeka kwaye hayi igama kusenokwenzeka, kukuba kukho ixabiso ukubetha ngexesha ushishino oluqhelekileyo. Ukuba
Horukon ahambe ngomatshini CR ejoliswe kwakuya kwamkelwa ivenkile, ukufunda ezifana mkhuba, ezifana nencum loqwalaselo qela kunye ROM ka Horukon, khetha i kusenokwenzeka ukuba bangene ezinamandla-ubomi kuma ngoku. Ukuba
abantu abafuna ukuphumelela gqolo e Hanemono, kuba hlengiso isikhonkwane yahlulwe isiphumo, oko kuya kuthathwa embindini isikhonkwane.
Noko ke, nokuba idatha ukuze nomelele, ukuba kufunyaniswe ukuba okanye hayi nsinya isikhonkwane, kwaye nsinya isikhonkwane induction akukhuthazwa ukuba utyalo-mali kangaka. Ukuma, ekubeni intlawulo kunciphisa oluikhawuleza kakhulu, kwaye xa hits, kucetyiswa ukuba endaweni elungileyo kunye nezinto cut.
Ukongeza, nokuba kukho hit ngokuhlwa ngosuku, ngokunjalo kangaka isantya ukujikeleza Okanye ukuba akunjalo, kwimeko le isantya ojikeleza ngaso abe novelwano phantsi, ndicinga ukuba kubhetele ukuhamba kwangoko kufa. Ukongeza, uhlengahlengiso isikhonkwane ngexesha yoshishino oluqhelekileyo iye isikhonkwane eqhelekileyo bakhe evenkileni. Ukuba
Ababukhumbulanga imeko isikhonkwane, kuba isikhonkwane karhulumente ngexesha lokukhululwa okanye xa isenzo uba angafundekiyo, Gcina jonga elungileyo. Nail oluqhelekileyo, kodwa i milimitha ezimbalwa yi-ratio lokuguqulwa, iphuma umahluko. Ukuze ubone isikhonkwane lula ukwahlula oseqongeni kakhulu zijolise amehlo, kodwa ukuba nabani na ufuna ukwahlula ngokulula, siya asizukuchaza ngesantya ejikelezayo. Ukuba ngokoMthetho
inani neziphithiphithi, kwi pa parlour kunaniselwano 3.5 yen, 13 amaxesha kwi yen iwaka, malunga 15 amaxesha kutshintshiselwano 3 yen, malunga 17 izihlandlo kutshintshiselwano 2.5 yen, kunye namaxesha malunga 20 exchange 2.3 yen kube ngoku. Abanye Umahluko imodeli kwaye, kakade, kodwa oku inani nokujikeleziswa amawaka avareji yen nganye Ukuba une uhlengahlengiso nail eqhelekileyo. Ngoko kakhulu okanye akabuya, usenokuba ucinga, kodwa oku leyinene.
kwishishini eqhelekileyo, isibakala ukuba ukuvula isikhonkwane, ngenxa yokuba phantse akukho, zama ukukhetha yomgangatho wamguqulayo elilingana ubuncinane ukuya umyinge imali ngenani yeenguqu. Noko ke, akwanelanga yen wambetha amawaka. Ekubeni wena uya kuba ezimagqagala kumsinga ibhola, ngokuthi betyale ubuncinane amawaka yen, singatsho kusengqiqweni ukugqiba ngokuthi yokubala avareji yenani yeenguqu. 3 exchange yen iye malunga 20 amaxesha. Abanye Umahluko imodeli kwaye, kakade, kodwa oku inani nokujikeleziswa amawaka avareji yen nganye Ukuba une uhlengahlengiso nail eqhelekileyo. Ngoko kakhulu okanye akabuya, usenokuba ucinga, kodwa oku leyinene.
kwishishini eqhelekileyo, isibakala ukuba ukuvula isikhonkwane, ngenxa yokuba phantse akukho, zama ukukhetha yomgangatho wamguqulayo elilingana ubuncinane ukuya umyinge imali ngenani yeenguqu. Noko ke, akwanelanga yen wambetha amawaka. Ekubeni wena uya kuba ezimagqagala kumsinga ibhola, ngokuthi betyale ubuncinane amawaka yen, singatsho kusengqiqweni ukugqiba ngokuthi yokubala avareji yenani yeenguqu.